Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IPegasus Airlines: I-Net Zero Emissions yeCarbon ngo-2050
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • News Sustainability • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseTurkey zokuPhula
IPegasus Airlines: I-Net Zero Emissions yeCarbon ngo-2050.
I-Pegasus ijoyina i-airlines ehamba phambili yehlabathi kwisisombululo sokufikelela kwi-"Net Zero Carbon Emissions ngo-2050" evunyiweyo kwi-International Air Transport Association's (IATA) ye-77th Annual General Meeting.
Ngokuzibophelela, okuhambelana noko kujoliswe kuko kweSivumelwano saseParis sokufudumala kwehlabathi kungadluli kwi-1.5°C, injongo kukuphumeza ukukhutshwa kwekhabhoni enguziro ngo-2050 nokwenza ukubhabha kugcineke.
I-Pegasus Airlines iqhuba umsebenzi wokubeka iliso, ukunika ingxelo kunye nokuphuculwa kwenkqubo-sikhokelo ebekwe yimithetho yelizwe kunye neyamazwe ngamazwe njengenxalenye yemizamo yokukhusela imozulu kunye nokulwa nokufudumala kwehlabathi.
I-Pegasus Airlines iya kuqhubeka nokusebenza ngokungakhathali ukuba ibe yeyona nqwelomoya iluhlaza eTurkey nakwingingqi
Ukulawula imisebenzi yayo kunye nemisebenzi phantsi kwendlela "yolondolozo lwendalo", Pegasus Airlines uzimanye neenqwelo moya ezihamba phambili zehlabathi kwisigqibo sokufikelela kwi-“Net Zero Carbon Emissions ngo-2050” esamkelwa kwiNtlanganiso kaWonke-wonke yoNyaka yama-77 ye-International Air Transport Association (IATA). Ngokuzibophelela, okuhambelana noko kujoliswe kuko kweSivumelwano saseParis sokufudumala kwehlabathi kungadluli kwi-1.5°C, injongo kukuphumeza ukukhutshwa kwekhabhoni enguziro ngo-2050 nokwenza ukubhabha kugcineke.
Ethetha ngesi sibhengezo, uMehmet T. Nane, iCEO yePegasus Airlines, uthe: “Njengoko Pegasus Airlines, ukunciphisa iziphumo ezibi kokusingqongileyo kunye nokuthintela ungcoliseko ngaphakathi kwesakhelo somjikelo wobomi yinxalenye ebalulekileyo yomgaqo-nkqubo wethu wokusingqongileyo. Sikwaqhuba umsebenzi wokubeka iliso, ukunika ingxelo kunye nokuphuculwa kwenkqubo-sikhokelo ebekwe yimimiselo yelizwe kunye neyamazwe ngamazwe njengenxalenye yemizamo yokukhusela imozulu kunye nokulwa nokufudumala kwehlabathi. Kwaye ngoku, liwonga elikhulu ukwenza esi sibophelelo kwisisombululo se-IATA se- "Net Zero Carbon Emissions ngo-2050" kunye neenqwelomoya eziphambili zehlabathi. UMehmet T. Nane uqhubeke wathi: “Ngolu kuzinikela, sixhasa kwaye sizibophelele ekujoliswe kuko ekuphumezeni ukukhutshwa kwekhabhoni enguziro ngo-2050 ngokusebenzisa amathuba abonelelwa kwicandelo lethu ngenkqubela phambili yezobuchwepheshe, ngenkxaso evela kwicandelo lezamandla kunye nolungelelwaniso nabachaphazelekayo. . Kwinkqubo-sikhokelo yendlela yethu “yemo engqongileyo ezinzileyo”, siya kuqhubeka sisebenza kwiiprojekthi zethu zotshintsho lwezithuthi kunye neeprojekthi zokuthomalalisa ikhabhoni kwixesha eliphakathi; kwaye kwixesha elide, kugxininise ekusetyenzisweni kwaMafutha eeAviation aZinzileyo (ii-SAFs), iinqwelomoya ezintsha zeteknoloji kunye nobuchwepheshe bokubanjwa kwekhabhoni. Siza kuqhubeka nokusebenza ngokuzimisela ukuze sibe yeyona nkampani yeenqwelo moya iluhlaza ikarikuni nakwindawo yethu.”
Njengenxalenye yeenzame zayo eziqhubekayo zokulwa nokutshintsha kwemozulu, Pegasus Airlines Isebenza ngokuthobela ngokupheleleyo imimiselo yecandelo echazwe ngoogunyaziwe besizwe nakwamanye amazwe ngaphakathi kwesicwangciso-nkqubo sokunciphisa ukukhutshwa kwerhasi yegreenhouse ebaluleke kakhulu kwicandelo lezomoya, kwaye iqhuba uhlolo lonyaka, iqinisekise kwaye inike ingxelo ngokukhutshwa kwekhabhoni yayo ngokwemigaqo yamazwe ngamazwe. Ukubeka ukubaluleka ekunciphiseni ukukhutshwa kwekhabhoni kumthombo, i-Pegasus isebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuphucula ukusebenza ukufezekisa oku okufana nokuguqula inqanawa encinci, ukuthenga iinqwelomoya ezikhuphayo ezisezantsi, ukunciphisa ubunzima benqwelomoya kunye nokulungiswa kwendlela. Ngokuzibophelela ekufezekiseni "i-Net Zero Emissions yeCarbon ngo-2050", kwaye phantsi komgaqo wayo ocacileyo, i-Pegasus Airlines iqalile ukupapasha i-carbon footprint yenyanga kwiwebhusayithi yobudlelwane botyalo-mali, ukuqala ngengxelo ka-Oktobha ka-2021. Zonke ezi nzame zikwacwangciswa ngokuhambelana nesicwangciso-qhinga solawulo sikaPegasus kummandla woZinzo (ESG – iNdalo, iNtlalo, noShishino) nokuxhasa iziphumo zayo.